4 Cunto oo Waayeelnimada soo Dagdagsiiyo Caafimaadka | Somali music, lyrics, songs, mp3 Warwad
4 Cunto oo Waayeelnimada soo Dagdagsiiyo
Duqnimada waa wax Dabiici ah. Maqaarka laablaaba, Timaha oo cirooba ama qafiifa marmarka qaar waxay ka soo dagdagaa xiligii loo baahnaa.
Waxaan idin sheegi doonaa cunooyin aad iska ilaali kartid, haddii aad tahay qof daneenaayo quruxdiisa.
Maqaar laablaabma, timo qafiifa iyo cijo jabjabta intaba waa calaamadooyin kuu sheegaaya inaad jirkaaga siineensid cuntooyin aanan ku haboonen. qofkii marwaliba cuna cunooyinka Fudfudad ee loo yaqaan Fast Food iyo macmacaanka badan kaliya ma dhawaacayaan xubnahaaga gudaha sida wadnaha, kilyaha, sambabada iyo WXM, waxuuse aad u dhawaawacaya xubnahaaga banaanka. 4 Cunooyin waa inaad iska yareesaa haddii aad rabto inaad joojiso duqnimada.
In Sonkorta caafimaadkeena haleeso ma’ahan wax daahsan xiligaan aanu joogno, hase yeesheeyee waxee sidoo kale maqaarkeena ka yareesaa jiidjiidnimada oo way adkeesaa sidaaso sababta in maqaarka inuu isku laablaabo, taasoo dajdajineeso xiliga duqnimada.
Qamriga xad dhaafka ayaa asigana maqaarka ka dhiga midaan liisho ahayn xataa waxuu kordhiyaa finanka kasoo baxa maqaarka .
Cusbada dhadhan ayee uyeeshaa cuntada badankeed. Cusbo badanse Kilyaha uun ma dhaawacdo, si lamid ah qurxudaada sababtoo ah biyaha jirka ku jiro ayee qalajineesaa, sidaas awgeed waxaad umuuqaneesaa qof caafimaadsaneen.
Kafayga xadidan waa caafimaad, hase ahaatee kafee badan Cortisol miisaankiisa dhiiga ku jiro badiya, taasi darteed harmoonka stres-ka ayee ku duqoosiiya maqaarka si dhaqsi ah.
Qofkii afartaa cunto si xadidan us isticmaala woo ka badbaadayaa waayeel inoo u muuqdo, hase yeeshee waxaa jiro cunto da’da yareesa..
Sida qudaarta cagaaran (spinatka iyo cagaarka kale).
Toonta, Loosaska, Basasha , Karootada , Bunka , sanjabiilka, babaaayga iyo guud ahaan qudaarta.